Dadaalka Naafada Dalka Iyo Dayacaadda Dadkeena | Somali Association for the Blind (SAB)
(3/Dec/maalinta naafada aduunka)
Sanad waliba naafada aduunka waxay sadaxda December ay u tahay maalin u gaar ah tan iyo markii qaramada midoobay sanadkii 1993 ay u aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee naafada aduunka oo lago hadlo daryeelka dadka naafada aduunida.
Naafada oo ka kooban guud ahaan qaybaha bulshada sida caruurta, dadka da`da ah, rag iyo dumar ayaa waxay bulshada ay ku dhax noolyihiin ay kuleeyihiin xuquuq dastuuri ah oo ka kooban daryeel gaar ah, waxbarasho heer waliba leh. inaan lafaquuqin iyo in laga qayb galiyo siyaasada iyo shaqooyinka bulshada.
Naafada somaliyeed oo haba yaraatee aan halin wax xuquuq ah ayaa waxay ku dhibaateysan yihiin maagaalooyinka iyo dagmooyinka dalka, iyadoo qaar kamid ah dadkaas aysan ka soobixin halka ay ku noolyihiin iyagoo quus ka taagan nolasha kadib markii faquuq joogta ah ay kala kulmaan qoysaska ay lanoolyihiin.
Bulshada qaar ayaa u arka inay dadka naafadu yihiin kuwo aan waxbadan qabsan karin oo aan bulshada wax ku soo kordhin karin, taasi ayaana keenta in qofka markii uu naafoobi in meel cidlo ah looga tago oo rajada iyo mustaqbalka uu nolasha kalahaa uu beelo.
Laakin waxaa hubaal ah in dad badan oo naafo ah ay ka horayaan qaarkamid ah bulshada kuwaasoo magac iyo misaan ku dhax leh umadda, iyagoo dunada ku soo kordhiyay waxyaabo kala kadisan, halka qaarna ay soonoqdeen hogaamiyaal caan ah oo xilal kala kadisan dunida ka sooqabtay.
Waxbarashada oo laf dhabar u ah hormarka aadanaha ayaa ah midda ay intabadan ay waayeen naafada Somaliyed taasi oo sabab u ah dib udhaca naafada dalka. iyadoona dawladihii dalka soomaray aysan ku riyoonin xitaaa in qorsho qaran oo wax lagu barayo dadka naafada ay dajiyaan, mustaqbal loogu sameyo.
Helyeeyo kamid ah naafada dalka oo aan quusan ayaa naftooda intay ku qanciyeen waxbarashada iskana iloobeen inay naafo yahiin ayaa dulqaad iyo dhabar adeeg u sameyay inay waxbartaan si ay udhisaan mustaqbalka Nolashooda ayna uga xuroobaan ku hoos noolaanshaha kuwo laga yaabo inaysan waxbadan dhaamin.
Tobankii sano aynu soo dhaafnay waxaa marba marka ka dambeysa soo miirsanayay naafada somaliyeed kuwaasoo ku soo baraarugay halka ayaalaan iyo meesha ay marayaan kuwa dhigooda ee ku nool dunida, iyado wacyiga bulshada ay ka qabaan dadka naafada ay kor ukaceyso.
Hormarka ugu fiican ee nafada dalka waxaa sameyay dadka araga la` kuwaasoo aas aasay dugsiyo ugaar ah oo ay waxkabartaan, ilaa shan xarumood oo dadka araga la` wax lagu baro ayaa hada ka jira dalka iyadoo sadax kamid ah ay caasimadda ku yaalaan halka labada kalena laga hirgaliyay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa.
Dugsiga indhoolayaasha Al-nuur oo ah dugsiga ugu baalaran ee dadka araga la`ay wax kabartaan ayaa sanadkan waxaa ka qalin jabiyay ardaydii ugu horaysay ee abid dalka gudihiisa kaga baxa dugsiga dhaxe kuwaas oo hada wax kabarta dugsiyada caadiga ee ku yaaalo magalada Muqdisho taasi oo bilow fiican u ah wax laqaybsiga naafada ee bulshada inteeda kale.
Waxaa sidoo kale dalka ka jiro inta ogaalkeyga ah labo dugsi oo si gaar ah wax loogu baro dadka maqalka la` iyadoo dugsiyadaas ay ubaahanyihiin in lagu sameyo hormarin wanaagsan si kor loogu qaado adeegyada waxbarasho ay siiyaan dadka maqalka la`.
Inkastoo uusan jirin dugsi gaar ah oo ay wax kabartaan naafada adimaha ayaa hadana waxaa jira xarumo lagu tabaro dadkaas, iyadoo qaar kamid ah naafada adimaha ay si toos udhigtaan dugsiyada iyo jamacadaha dalka qaar halkaas oo mararka qaar ay kala kulmaan talaaboyin caqabad ku ah waxbarashadood.
Fadalan naafada ka soo saara aqalada si ay urkaan iftiinka dunida
Geey koobta ku haboon ee uu wax kubaran karo si uu udhiso mustaqabalkiisa
Kadaa faquuq, si uusan usii usiinaafobin
Hagu yeerin magac uusan jacleesan oo muujinaya naafo nimadiisa
U ogolow inuu soo booqdo xaruntaada ganacsi ama gurigaaga sidaas daraadeed usamey meel uu ka soogalo.
Qofna uma naafoobo xubin uu belay hayeeshee waxaa naafo ka dhiga bulshadiisa
W.Q: Sadaam Maxmed Dahir
Hayadda daryeelka Naafada (DWF)
Ururka indhoolayaasha somaliyeed (SAB)
Ururka naafaa Haweenka (SOWDO)
Dugsiga indhoolayaasha Al-nur ( DIAL)